LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့မွမ်းမံနည်း | Androidsis
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ LG G2 အတွက်တင်ပြခဲ့သော Rom တိုင်းကို၎င်းကိုအကောင်းဆုံးရမ်ဟုအများအားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြောင်းပြောခြင်း၏အန္တရာယ်မှာကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုအကောင်းဆုံးရမ်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်အားသင်၏အချိန်အနည်းငယ်ကိုမြှုပ်နှံထားသည့်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုစေချင်ပါသည်။ ခင်ဗျားဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့သီလအားလုံးကိုပြသတဲ့ဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ် LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Rom AOSP။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ Roms အသစ်များထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှပိုအလုပ်လုပ်ကြသည်၊ ပိုလန်လုပ်သည်နှင့်အမျှယခင်ဗားရှင်းများထက်များစွာသာလွန်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြပါ
ထို့နောက်ရှင်းပြခြင်းအပြင်၊ LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်းဆိုလိုသည်မှာ Android ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် AICP Rom ဟုအဘယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသနည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး AOSP Rom နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D802 ။
ဤဆောင်းပါးကိုဖွင့်လှစ်သောဗီဒီယိုတွင်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းရန်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာ LG G2 မှ Android 5.1.1 Lollipop ဖြစ်သည်LG G2s သည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးသော Rom ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းရင်းအားလုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ Rom AICP ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအပြည့်အဝအတိုချုပ်ဖော်ပြသည့်ဤသဘောတရားများတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခံရသည့်အကြောင်းပြချက်အချို့။
1 Rom AICP LG G2 Android 5.1.1 Lollipop ၏အင်္ဂါရပ်များ
2 LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့ AICP မှတဆင့်မွမ်းမံရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
4 LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့ AICP အသုံးပြု၍ မွမ်းမံနည်း
Rom AICP LG G2 Android 5.1.1 Lollipop ၏အင်္ဂါရပ်များ
တည်ဆောက် အန်းဒရွိုက် 5.1.1
AICP အပိုပစ္စည်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ပေါ်ရှိမည်သည့်အရာကိုမဆိုကိုင်တွယ်ရန်အဆုံးမဲ့ configuration options များရှိသည်။
ကိုသက်ဝင်စေနိုင်မည့် option DPI သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်သည် ၅၁၀ dpi သုံးရန်အကြံပြုသည်။
အတွက်ရွေးချယ်စရာ navigation bar ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အရောင်ကိုပြောင်းပါဆိုလိုတာက LG G2 ရဲ့ virtual keyboard ပါ။
မကြာမီက Lollipop application များနှင့်အားဖြင့်လဲလှယ်နိုင်သည် Omniswift.
စိတ်လှုပ်ရှားစရာခြမ်း slider ကို, ခေါ်ဆိုပါ အက်ပလီကေးရှင်းစက်ဝိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး application မ်ားကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မည်သည့် screen မှမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Notification bar အတွက် Mods များ။
ကြော်ငြာကို Block Android ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်အပလီကေးရှင်းများမှကြော်ငြာများကိုပိတ်ဆို့ရန်။
AICP OTA AICP အပိုချိန်ညှိချက်များမှညစဉ်ညသစ်ဗားရှင်းအသစ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
မယှဉ်နိုင်တဲ့ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ့ကိုငါ့ကိုအကြောင်းကို 16 နာရီမျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်5နာရီမျက်နှာပြင်အသုံးပြုခွင့်ပြုတော်မူပြီ။
ရောမလူမျိုးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်အရအမြဲတမ်းထင်နေပုံရသည် LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Romဒါပေမယ့် Android ROM တွေလိုပဲအားနည်းချက်လည်းရှိတာပေါ့ ကျွန်ုပ်တို့တွင် LG ၏ကိုယ်ပိုင် application များ၊ Quick View၊ Quick Remote, FM ရေဒီယိုသို့မဟုတ်ကင်မရာစသည့် application များမရှိပါဤ Rom တွင်ပုံမှန်ရှိသည့်ကင်မရာအပလီကေးရှင်းဖြစ်သောဇာတိဂူဂဲလ်ကင်မရာသည် LG G2 ၏မူလကင်မရာကိုငြူစူရန်မလိုအပ်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်သည်။
LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့ AICP မှတဆင့်မွမ်းမံရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များအမြဲတမ်းပို။ ပို။ ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည် Android Kit Kat, Jelly Bean သို့မဟုတ်အခြား CM-based Rom version ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ Stock-based ဗားရှင်း Android Lollipop မှစတင်သောသူများအတွက်၊ သူတို့မတိုင်မီငါဒီ post ၌ငါပေးသောအကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် Rom Lolllipop AOSP ကြောင့် update လုပ်နိုင်ရန်။
တရားဝင် Lollipop တွင်သို့မဟုတ် Rom Stock ကို အခြေခံ၍ ပြုပြင်ထားသော Rom များမှအထက်ပါလင့်ခ်မှသင်ပို့ပေးသည့် tutorial သို့သွားသောသူများ Kit Kat သို့ Jelly Bean သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်းကျွန်ုပ်တွဲနေသော ZIP ဖိုင်ကို download လုပ်ရပါလိမ့်မည်။ unzip လုပ်ပါ ဂျယ်လီ Bean Bootloader ZIP အပေါင်း Kit Kat Modem ZIP။ ဤဖိုင်နှစ်ခုသည်သင်လိုအပ်လိမ့်မည် ပထမဆုံး Recovery TWRP မှ flashငါရှင်းပြသည့်အတိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် AICP Rom ၏ zip ကို flash ပြုလုပ်နိုင်ရန်ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်အနည်းငယ်ကိုငါထားခဲ့မည်။
LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ် D802 ရှိသည်။
Root and Recovery ကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုပြုပြင်ထားတယ်.
Nandroid Backup ကို အမှု၌ငါတို့တစ်ခုလုံးကိုစနစ်၏ယင်ကောင်။
အရံကူးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများနှင့်ဒေတာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လုပ်ငန်းစဉ်၌ကတည်းကကျနော်တို့က Hard Reset ပြုလိမ့်မည်။
USB debugging လုပ်နိုင်ပါတယ် developer settings ကိုမှ။
လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုကန့်သတ်ထားတယ် သင်ဤ link ကိုမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်ကိုနောက်ဆုံးညဥ့်အခါ အဖြစ် Android 5.1.1 Lollipop အတွက် Gapps မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ ဒီကနေ download လုပ်ပါ။ စကားမစပ် AICP Nightly ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသည်တရားဝင် download စာမျက်နှာ၏ထိပ်တွင်ပေါ်လာသည်။
download ပြီးတာနဲ့ LG G2 ကို Recovery Mode ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာကိုညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်မည်သည့်ခြေလှမ်းကျော်သွားခြင်းမရှိဘဲ။
LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့ AICP အသုံးပြု၍ မွမ်းမံနည်း
မှပြီးသား ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း အောက်ပါအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည် -
Wipe option ကို ၀ င်ပြီး Internal SDcard မှလွဲ၍ Wipe အားလုံးကိုရရှိနိုင်သည်။
Jelly Beam Bootloader ကို flash လုပ်တယ်။ Android Lollipop ၏စတော့ရှယ်ယာအခြေပြုဗားရှင်းတွင်သာဖြစ်လျှင်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Kit Kat Modem ကို flash လုပ်သည်။ Android Lollipop ၏စတော့ရှယ်ယာအခြေပြုဗားရှင်းတွင်သာဖြစ်လျှင်။
ကျနော်တို့ AICP Rom ၏ Zip flash ။
Zip of the Gapps Android 5.1.1 Lollipop ကို flash လုပ်သည်။
Dalvik နှင့် cache ကိုသုတ်ပါ။
ဒီအတူငါတို့စတင်ပါလိမ့်မယ် Android2မှ LG G5.1.1 ငါတို့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ် AICP ၏ bootanimation စကားမစပ်အမှန်တကယ်အံ့မခန်း boot animation တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့မွမ်းမံနည်း
ဟယ်လို။ မေးခွန်းတစ်ခုကိုလက်တင်အမေရိကရှိ D805 တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။
Francisco ကသူကသူကသတ်မှတ်သည်ဤသို့မဟုတ်ကြောင်းမော်ဒယ်များအတွက်ပြောသောအခါသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ပြ D802, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖိုင်များ D802 အဘို့သာ, အချည်းနှီးမေးခွန်းများကိုရှောင်ကြဉ်ကြကုန်အံ့။
D801 မော်ဒယ်အတွက်စစ်ဆေးသည် (ဤပုံစံအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖိုင်များအားလုံးနှင့်အတူ) perfectlyုံအလုပ်လုပ်
ငါသည်ငါ၏ D805 on အပေါ်စမ်းသပ်သွားမယ်
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် LG applications များသို့မဟုတ် CM အတွက်၎င်းတို့၏ PORTS များကိုစိတ်ဝင်စားပါကသင်သည် HTCMANIA ရှိ CYANOGENMOD POST သို့သွားနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ G2 ကိုရည်စူးသည်မှာထင်ရှားသည်။ ထို post တွင်အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ် LINK ကိုထည့်သွင်းထားသည် (၎င်းသည် SPAMM မဟုတ်ပါ) ငါ undecided ကူညီဖို့ကြိုးစား): http://www.htcmania.com/showthread.php?t=974618
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို CyanogenM အပြင်ဘက်တွင်မစမ်းသပ်ပါ။ သို့သော် AICP သည် CM ကိုအခြေခံပါကပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သင့်သည်ဟုယူဆပါသည်။ ငါကြီးမြတ် Francisco ကမြင်သည်နှင့်ကြိုးစားပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
၎င်းသည်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ အလင်းဖြစ်သည်။ ဤစာစောင်၏ခေါင်းစဉ်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ FM RADIO, QuitRemote နှင့် evomagic မှအံ့အားသင့်စရာကင်မရာကိုသာစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးကျန်များသည်စမ်းသပ်မှုနှင့်ကြည့်ရှုရန် ဟုတ်တယ် Franciso ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ d805 အတွက်ကောင်းသော rom တစ်ခုခုကိုလူတိုင်းသိတယ်၊ ငါတန်ဖိုးထားတယ်။
ငါအဲဒါကို install လုပ်လိုက်တော့အဲဒါမကောင်းဘူး မင်းပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ရေဒီယို FM မရှိဘူး။ အဆိုပါကင်မရာကို misrecognizes ။ ငါ ModernCombat5 ရဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းချိတ်ဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်အမှားတစ်ခုပေါ်လာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ပြန်ဖွင့်ရမည်။ သင်ဘာသာရပ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ငါကီးဘုတ်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူး Emoticons ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါ ၂၄ နာရီစစ်ဆေးပြီးပြီ၊ အခန်းမကောင်းဘူး၊ ငါနာမည်ပဲရှိတယ်၊ နောက်ကျကျန်နေသေးတယ်၊ အမှားအယွင်းများ၊ ငါ့ကို ၀ န်ဆောင်မှုမရှိတဲ့စာလည်းပြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလက်ခံရရှိတယ်၊ ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်၊ ငါ့ရဲ့ဒေတာအထုပ်ကိုသုံးနိုင်တယ်၊ ငါမိုးသည်းထန်စွာကစားခြင်း, စျေးပေါဖုန်း၏ကီးဘုတ်သုံးလျှင်, ငါနှင့်ငါရေဒီယိုအားလုံးအရေးကြီးတယ်ထင်, အဘို့ငါနံပါတ်များကိုတိုက်ရိုက်ပြသမထားဘူး, ငါ BLISs ဆောင်ပုဒ်ရှိသည်မယ်လို့ထင်နှင့်ငါ့ကိုသိမ်းသွား ဒီ post ၏ပုံများ, ဒါပေမယ့်ဆောင်ကြဉ်းသောဆောင်ပုဒ်။ ကင်မရာကလိုချင်တဲ့အရာများစွာကိုစွန့်ခွာသွားပြီ။ အခုငါအရင် Evomagic (သို့) Quetzal ကိုဘယ်လိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ Francisco ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်
MC5 ကိုလည်းငါကစားခဲ့ပြီး EVOMAGIX ထက်အပူလျော့နည်းသွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော၊ လေယာဉ်ပျံစနစ် wifi အလွန်ဆိုးရွားပြီးသွားလာရန်နှေးသည်။
ကောင်းပြီ၊ AICP OTA မှတစ်ဆင့်ဖုန်းပေါ်သို့နောက်ဆုံးသတင်းများရောက်ရှိလာသည်။ TWRP မှတပ်ဆင်ရန်ရေဒီယို fm နှင့် G3 ကင်မရာရှိသည့် GAPPS ရှိပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သင်ခန်းစာကိုလိုက်နာပြီးအားလုံးပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အခန်း stock lollipop 5.0.2 ကို LG logo တွင်တည်ရှိပြီးမစတင်မှီကတည်းကကျွန်ုပ်၏အခန်းစတော့ရှယ်ယာ lollipop XNUMX ကိုပြန်ယူသောအခါကျွန်ုပ်ပြtheနာရှိသည်။
JB bootloader ရှိလို့ရလား။
သေချာတာပေါ့သူငယ်ချင်း၊ KitKat Bootloader ကိုအရင် Flash လုပ်ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းမယ်။
သင့်တွင်သံသယများရှိပါက Rom Stock Lollipop ကိုလိုအပ်သောဖိုင်များနှင့်မည်သို့ Flash လုပ်ရမည်ကို Androidsis တွင်မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်။ Wipes လုပ်နေသော Stock Lollipop Rom သည် Malas သည် KK bootloader ကို ဦး စွာ flash လုပ်ပြီး terminal ကို install လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပြီးလျှင် nandroid backup ကိုပြန်လည်ရယူပြီးပြန်ယူပါလိမ့်မည်။
Jashua ဂျော့ခ်ျ ဟုသူကပြောသည်
Hello Francisco ငါ ROM ကို LG G2 D805 မှာ install လုပ်လို့ရမရသိလိုချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုဒီသံသယကနေငါထုတ်ပေးနိုင်မလား။
Jashua George အားပြန်ပြောပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက် ၃ ကြိမ်ပိတ်ထားခဲ့သည်
တွစ်တာတွင်ရှိနေစဉ်မိုဘိုင်းကိုသတိပေးခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်စတင်သည်။ super နှေးကွေးသော wifi ဖြင့်လေယာဉ်ပျံစနစ်။ ဘက်ထရီကကျွန်မကိုနှစ်ခုကနေသုံးလုံးလောက်မျိုချလိုက်တယ်။ စနစ်သည်အကြိမ်ကြိမ်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ငါဖုန်းခေါ်တဲ့အခါငါကချိတ်ဆွဲချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်သူမနာခံခဲ့ဘူး။ ငါနောက်ကျော Cloudy စူပါတည်ငြိမ်သွားတယ်။ Francisco ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၊ တိုင်ကြားချက်အနေနှင့်မယူပါနှင့်။
ဂျော်နီ johell ortiz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ vs980 တွင်ပြုလုပ်လိုသည်မှာကျွန်ုပ်အားတပ်ဆင်ခြင်းအမှားတစ်ခုပေးသည်။ ငါ Lollipop တွင်ရှိနေပြီး jb bootloader နှင့် kk baseband ကိုလွင့်ပစ်လိုက်သည်
Johnny Johell Ortiz အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါ KK bootloader ကိုအရင်စလိုက်ပြီးအခန်းထဲရှိ Lollipop ၏ backup ကိုပြန်ထားလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဆင်မပြေဘူး၊ ဆိုးတာကတော့ LG logo ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဟာကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ t ကိုပြန်လည်နာလန်ထူသို့သွားပါ။
၎င်းသည် download mode သို့ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အမြစ်နှင့်အခြားအရာများဆုံးရှုံးလျှင်ပင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
ဒါဟာစတင်သောအခါငါ pin ကိုအမှားကိုပေးသည်နှင့်တိုးပါဘူး, ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်ဘာမျှမ restart လုပ်ပါပြီ။ အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။
ငါ sim ၏ pin ကိုစတင်ထည့်သွင်းသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးပြီး၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ငါ "sim စစ်ဆင်ရေးမအောင်မြင်" ရ
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ sim sim ကိုလက်မခံဘူး
ကောင်းပြီ ... ၅.၁.၁ ကနေ bug ဖြစ်ပုံရသည်။ သင်ယခင် ROM ရှိ sim ၏ pin ကိုပိတ်ထားရန်လိုပြီး၊ voila ……၎င်းသည်ဆက်လက်မတောင်းတော့ပါ
Jose maria rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်အတွက်ပထမ ၂ ကြိမ်က pin ကအမှားတစ်ခုပေးခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့မိုဘိုင်းကိုမထိဘဲ ၁၀ စက္ကန့်ချန်ထားခဲ့ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအခြားအမှားကတော့ chat microphone ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် WhatsApp အော်ဒီယိုတွေဟာအားနည်းနေပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆူညံသံများ - ဗီဒီယိုမှအသံ - အသံဖမ်းစက်ကပြီးပြည့်စုံစွာအသံထွက်သည်။
Jose Maria Rodriguez ကိုပြန်ပြောပါ
ဒီ ROM ကို d800 မှာတပ်ဆင်လို့ရလား။
Arthuro Vallejo placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ "D805" အတွက်ဤ rom သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်လာနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကြီးကိုတွေ့မြင်ရပြီးယင်းကိုရယူလိုပါက \_ t
ကျွန်ုပ်သည် x aki အသစ်၊ ဒီတော့မင်္ဂလာပါ၊ အားလုံး😀
Arthuro Vallejo အားပြန်ပြောပါ
Rafael Ignacio Guerrero Mars ဟုသူကပြောသည်
အကြောင်းပြချက်များနှင့်စိတ်ကြိုက် roms များကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါက၎င်းတို့သည်အမှားအယွင်းများလွန်းခြင်းကြောင့်ပိုကောင်းသည်။ ၎င်းသည် ota မှတဆင့် update ကို kaluar ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည် LG pc suite program ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
Rafael Ignacio Guerrero Marte အားပြန်လည်ပြောပြပါ
ကျွန်ုပ်မှာ CyanogenMod2ညမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LG 12 ရှိပါပြီ သုံးစွဲသူမှတ်ဥာဏ်ဒေတာ မှလွဲ၍ twrp အားလုံးမှ ista mod flashing ကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိ d801 ရှိ d80120g ဗားရှင်းတွင် Kitkat နှင့် root နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် TWRP ဗားရှင်းတို့ပါ ၀ င်ပါသည်။ ၎င်းကိုဒီ rom သို့မွမ်းမံလိုပါသည်၊ အခြေခံအားဖြင့်အဆင့်များမှာ
၁) nandroid backup
၂။ အတွင်းသိုလှောင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ (system, dalvik, data, cache) ကိုရှင်းလင်းပါ
၃) Rom ကို install လုပ်ပါ
4) gapps ကို install လုပ်ပါ
၅) dalvik / cache နှင့် reboot system ကိုဖျက်ပစ်ပါ
ငါခြေလှမ်းတစ်စုံကိုကျော်သွားလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်သည် JB bootloader တွင်ရှိနေပြီး Kitkat modem ကို flash လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ KK တွင်ရှိနေပြီးပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ KK bootloader အတွက်လင့်များရှိပါသလား။
နောက်ထပ်သံသယတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Cloudyg5.1.1 တွင် android 3.3 ကိုမထည့်သွင်းမီ backup boot အပြည့်ပြုလုပ်သည် (boot; system; data; cache; efs and modem) kk bootloader ကိုတပ်စရာမလိုဘဲ၎င်းကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်ပါက၊ ? ဆိုလိုတာကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တာလား။
G2 D800 မှာအလုပ်လုပ်ရင်သူတို့သိမှာလား။
မေးခွန်းတစ်ခု !! ငါ D806 ရှိတယ်၊ D802 အတွက် zip ကို install လုပ်ရင်အတူတူပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် d802 ရှိပြီး cm12 မှ၎င်း flash ကိုရွေ့နိုင်သလားဆိုတာကျွန်ုပ်သိလိုပါသလား။ သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုလိုအပ်ပါသလား။ မင်္ဂလာပါ🙂
Juan Gutierrez ဟုသူကပြောသည်
ဆော့ဖ်ဝဲမဟုတ်ဘဲ hardware ဟုဆိုသောကြောင့် dpi ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်သင့်သည်မှာ resolution ကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ hardware တစ်ခုတည်းဖြစ်သောကြောင့်တစ်လက်မလျှင်တစ်လက်မပို pixels ထပ်မထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Juan Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
Manuel cermeño ဟုသူကပြောသည်
သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုအခြားသူများ၏မျက်စိမှ Andrognito2ဖြင့်ဝှက်ထားပါ